Microsoft na-agba mbọ ịghọta Windows 11 chọrọ na vidiyo ọhụrụ
Microsoft etinyela vidiyo nke na-anwa ịkọwapụta ihe ndị chọrọ nke Windows 11, ebe ha na-ekwenye na nkụda mmụọ nke ụfọdụ ndị na-agaghị enwe ike ịkwalite sistemụ arụmọrụ. Ọ dị mma ịsị na izipu ozi maka Windows 11 chọrọ abụghị ...
Ndị na-agba ọsọ na-eji asụsụ mmemme mmemme iji gafee nzacha nchekwa
Ndị na-ede akwụkwọ Malware na-eji asụsụ mmemme mmemme achọpụtaghị nke ọma iji zere nchọpụta, ndị nchọpụta cybersecurity na-ekwu. Ndị ọrụ nyocha BlackBerry na ndị ọgụgụ isi na-akwado nkwupụta a site na nyochaa mmụba ...
Cloudflare na-akatọ ọrụ ntanetị nke Amazon maka oke oke
CDN onye na-eweta Cloudflare kpọrọ Amazon Web Services (AWS) maka ụgwọ ya dị elu nke na-eme ka o siere ndị ahịa ya ike ịkwaga data ha na igwe ojii ọzọ. Na 2018, Cloudflare malitere Bandwidth Alliance tinyere ndi igwe ojii 15 ndi ozo na-achoputa ihe na ...
TSMC yigharịrị mkpebi na ụlọ ọrụ mgbawa EU
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) kwuru na ọ ka dị ngwa ikwu ma ọ ga-ewulite ụlọ nrụpụta na Germany, ka okwu banyere ụlọ ọrụ mgbawa ya na EU ka dị ọhụrụ. Dị ka Reuters kọrọ, ọ bụrụ na TSMC kpebiri iwu ...
N'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ maka ịzụta Amazon gị na Bitcoin
Amazon na-akwadebe ịnabata ịkwụ ụgwọ Bitcoin mgbe afọ a gasịrị, ọ bụ ezie na nnukwu ụlọ ọrụ e-commerce na-arụkwa ọrụ na ịmepụta akara ngosi dijitalụ nke ya, dị ka isi mmalite maara ihe ahụ si dị. As kọrọ site City AM site ...